Somaliland Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Somaliland'
Somaliland oo Maanta Sheegtay Inay Xiriirka u Jartay Dalka Qadar (VIDEO)
Soomaalialnd ayaa maanta si buuxda u taageeray Go’aankii kas oo baxay 5 dal oo kamid ah Wadamada jaamacadda Carabta kaas oo ay ku sheegeen in ay xiriirka u jareen dowladda dalka Qadar. Shir ay yeesheen golaha Wasiirada mamulka Soomaalialnd ayay maanta isku raaceen in si buuxda loo taageero go’aankaasi, iyadoo ay jireen wasiiro qaarkood oo …
Wariye Coldoon oo ka Hadlay Xaqdarada ka Jirta Xabsiyada Somaliland (VIDEO)
Saxaafi Cabdi Maalik Muuse Coldoon oo mudo ku xirnaa Xabsiga Magaalada Hargeysa, balse shalay uu cafis u fidiyay Madaxweynaha Maamulka Somaaliland Axmed Maxamed Maxamuud(Siilanyo) ayaa ka sheekeeyay waxyaabihii uu la kulmay intii uu ku jiray Xasbiga iyo dhibaaatada iyo xaqdarada baahsan ee waqtigan ka jirta. Coldoon ayaa sheegay in Xabsiga uu ku arkay dad dhibteysan …
Madaxweynaha Somaliland mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo maana khudbad dheer ka jeediyay Munaasabad lagu xusayay 18-ka May oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa kaga hadlay codsigii Madaxweynaha Soomaaliya dhawaan u jeediyay Beesha Caalamka ee ku aadanaa in Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaado. Siilaanyo ayaa muujiyay in uu ka soo horjeedo in cunaqabateynta hubka laga …
Shirkadda DP-World oo so Rasmi ah Loogu Wareejiyay Dekedda Magaalada Berbera (SAWIRRO)
Magaalada Berbera waxaa maalintii shalay oo Khamiis ahayad si rasmi ah Dekadda Berbera loogu wareejiyay shirkadda DP-world ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Munaasabadan koobnayd ayaa waxaana ka qeyb galay Madaxweynaha Maamulka Somaliland mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo masuuliyiin ka tirsan shirkadda DP-world. Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa kadib shirkadda si rasmi …